नेपालगन्जको मेयरमा धवलसम्शेर र उपमेयरमा कांग्रेसकी थापा विजयी – Vision Khabar
नेपालगन्जको मेयरमा धवलसम्शेर र उपमेयरमा कांग्रेसकी थापा विजयी
। २१ असार २०७४, बुधबार ०३:१८ मा प्रकाशित
नेपालगन्ज: नेपालगन्ज उपमहमानगरपालिकाको मेयरमा राप्रपाका डा. धवलसम्शेर राणा र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका उमा थापामगर विजयी भएका छन्। मत गणनाको अन्तिम परिणामअनुसार राणाले १२ हजार ५ सय १५ मत प्राप्त गरे। उनका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी नेपाली कांग्रेसका डा. सुरेशकुमार कनोडियाले ८ हजार ७ सय ३० मत ल्याएका छन्।
राणा यसअघि २०५४ सालमा नेपालगन्जको मेयर बनिसकेका छन्। त्यतिबेला उनी एमालेबाट मेयरमा निर्वाचत भएका थिए।
कनोडियाभन्दा ३ हजार ७ सय ८५ बढी मत ल्याएर धवल विजयी भएका हुन्। डा. राणा तत्कालीन नेपालगन्ज नगरपालिकाको पूर्वमेयर समेत हुन्। मंगलबार बिहान २ बजेतिर घोषित अन्तिम मत परिणाम अनुसार उपमेयर थापाले १० हजार ७ सय ३१ मत प्राप्त गरिन्। उनको निकटतम प्रतिद्धन्द्धी राप्रपाकी रमारानी बैश्यले ८ हजार ९ सय २४ मत ल्याइन्। कूल २३ वटा वडा रहेको उपमहानगरपालिकाका वडामा नेपाली कांग्रेसले वर्चश्व जमाएको छ।
मेयर र उपमेयरको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि मध्यरातमा पनि मत गणना स्थल भेरी प्राविधिक शिक्षालय बाहिर सर्वसाधारणको ठूलो भिड लागेको थियो।
उता बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा भने एमाले विजयी भएको छ। अध्यक्षमा एमालेका मानबहादुर रुचाल र उपाध्यक्षमा सोही दलकी शारदा बिक विजयी भएका छन्। सोमबार मध्यरातमा सार्वजनिक भएको मत परिणाम अनुसार अध्यक्ष रुचालले ९ हजार ७ सय ७२ मत प्राप्त गरेका छन्।
उनका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी नेपाली कांग्रेसका देवबहादुर खत्रीले ६ हजार ५ सय ८० मत ल्याए। उपाध्यक्षमा निर्वाचित शारदाले ९ हजार ७ सय ३८ मत प्राप्त गरेकी छन्। उनको निकटतम प्रतिद्धन्द्धी कांग्रेसकी भावना चौधरीले ७ हजार ३ सय ७७ मत ल्याएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। बाँकेका कुल ८ जटा स्थानीय तह मध्ये कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकाको गणना चलिरहेको छ। तीन वटै तहको मेयर र उपमेयर तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेले अग्रता लिइरहेको छ।